यस्तो छ साढे दुई करोड कोरोना खोप नेपाल ल्याउने सम्झौताको वास्तविकता – Rapti Khabar
१३ असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको साढे २ करोड डोज खोप नेपाल आउने खबरले मंगलबार एकाएक बजार तात्यो । यस्तो खबर आउनुको कारण हो, रसियन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (आरडीआईएफ) ले गरेको घोषणा । यो खबर राजकुमार श्रेष्ठले अनलाइनखबरमा लेखेका छन् ।
आज २०७७ भदौ २८ गते आइतबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
आज २०७७ भदौ २८ गते आइतबारको राशिफल । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष सोखले खर्च बढाए पनि मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण […]
के चीनमा बनेको कोरोना खोप कुन-कुन देशले पाउलान् ?